बच्चालाई पनि हुन्छ मधुमेह, यसरि सिखाउनुस बच्चालाइ मधुमेह व्यवस्थापन गर्न – tvNEPALI
Posted on १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १४:३९ May 31, 2018
अक्सर हामी सोच्छौं, मधुमेह त वयस्क एवं बृद्धबृद्धाको रोग हो । तर, तपाईले कति हेक्का राख्नु भएको छ, बालबालिका पनि अहिले मधुमेहको जोखिममा पर्दैछन् ।
सामान्यत उमेर धेरै भएका मानिसलाई मात्रै मधुमेहको रोग लाग्छ भन्ने आमधारणा छ । तर, बच्चाहरु र किशोरकिशोरीलाई पनि मधुमेह लाग्ने क्रम बढ्न थालेको छ ।
भर्खर भर्खरै मधुमेह रोग लागेको थाहा भएको बच्चाहरु र किशोरकिशोरीहरुलाई आफ्नै भावनात्मक प्रतिक्रिया र अरुले उनीहरुमाथि गर्ने प्रतिक्रियाहरुबाट संर्घष गर्नुपरेको हुन सक्छ । र, उनीहरुलाई विद्यालय जान पनि मन नलाग्न सक्छ ।
त्यस्तै मधुमेह भएका किशोरकिशोरीहरुले साथीसँग यौन, मदिरा, धुमपान र विभिन्न लागुपदार्थको प्रयोगजस्ता कुरामा धेरै चिन्ता व्यक्त गर्न सक्छन् ।
कुनै बच्चा वा किशोरकिशोरीलाई मधुमेह भएको थाहा भएपछि त्यसको लागि समायोजन गर्न केहि सयम लाग्छ । उनीहरुलाई ब्लड ग्लुकोज रुटिन बनाउनुपर्ने हुन्छ, इन्जेक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र कसरी कार्वोहाइड्रेट काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मधुमेहको स्वास्थकर्मीसँग नियमित भेट्नुपर्छ र तलमाथि भइराख्ने ब्लड ग्लुकोज लेभलसँग लड्नुपर्छ ।
जब बालबालिकालाई मधुमेहले गाँज्छ
मधुमेह भएका बच्चाहरुको लागि प्रत्येक दिन संर्घषपूर्ण हुन्छ । मधुमेह भएका बच्चाहरु सामान्यतया यी कुरामा चिन्तित हुन्छन् । आमाबुबाहरुले यी कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।
१. उनीहरुलाई परिवारले भारको रुपमा लिएको जस्तो सोच्ने गर्छन् ।
२. उनीहरु बिरामी भएको जस्तो हिसाबले व्यवहार गरिन्छ जसले उनीहरुलाई नराम्रो महसुस गर्छ ।
३. खानाको बारेमा बारम्बार सोधिने, स्वास्थ्य कस्तो छ, इन्सुलिन लिए कि लिएनन् भन्ने बारेमा सोधिने हुनाले दिक्क मान्न सक्छन् ।
४. परिवारबाट थप हेरचाह पाउने भएकाले अरु भाइबहिनीमा इष्र्याको भावना आउँछ ।
५. बच्चा वा ठूला सबैलाई डायबिटिजको कारणले सधै रिस उठ्ने, नराम्रो लाग्ने र दिक्क लाग्ने कुरा सामान्य हो । किनभने डायबिटिज लामोसमयसम्म रहिरहने अवस्था हो त्यसैले यसको लागि जीवनभर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
६. यदि बच्चाहरु उनीहरुको डायबिटिज म्यानेजमेन्टको लागि सघर्ष गर्दैछन् भने उनीहरु निराश भएको चिन्तित भएको हुन सक्छन् । उनीहरुलाई डायबिटिजको हेल्थ केयर टिमबाट सहयोगको आवश्यकता हुन सक्छ । सामाजिक कार्यकर्ता वा मनोवैज्ञानिकले पनि सहयोग गर्न सक्छ ।
मधुमेह भएका साना बच्चाका आमाबुबाहरु उनीहरुको बच्चाको मधुमेहको व्यवस्थापनमा धेरै नै संलग्न भएका हुन्छन् । जब बच्चा ठूलो हँदै जान्छ उनीहरुलाई मधुमेहको व्यवस्थापन गर्ने आत्मविश्वास र तरिकाहरु सिक्न आवश्यक छ ।
बच्चा वा किशोरकिशोरीलाई मधुमेह व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन आमाबुबाहरुलाई धेरै गाह्रो हुन्छ । आमाबुबाहरु आफ्नो बच्चाको विषयमा धेरै नै चिन्तित हुन्छन र आफ्नो बच्चाले त्यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैनन कि भन्ने लाग्न सक्छ ।
तर, बच्चाले भने आत्मनिर्भर हुने चाहना राख्न सक्छन् । अभिभावकले बच्चालाई सहयोग गरेर बच्चलाई मधुमेह व्यवस्थापन गर्न आत्मनिर्भर बनाइ सन्तुलित भूमिका निभाउन सक्छन् ।
यसरी सिकाउन सकिन्छ बच्चालाई मधुमेह व्यवस्थापन
१. बच्चालाई उनीहरुको मधुमेह व्यवस्थापनमा पहिले देखि नै
सहभागी हुन सहयोग गर्नुहोस् । यसमा बच्चाले उनीहरुको इन्जेक्सन साइट वा उनीहरुको ब्लड ग्लुकोज मिटर अन गर्ने जस्ता काम हुन सक्छन् । यस्तो सहभागिताले उनीहरुलाई स्वतन्त्र बन्न र आत्मविश्वास बढाउन मद्धत गर्छ ।
२. बच्चाहरुको सहभागिताको स्तर उमेरअनुसार ठिक छ भन्ने निश्चित हुनुहोस् । तपाईको बच्चाको मधुमेह एडुकेटरले उमेर उपयुक्त जिम्मेवारीहरु उनीहरुलाई दिन सक्छन् ।
३. बच्चाहरुलाई मधुमेह शिविरमा उपस्थित हुन हौसला दिनुहोस् । तपाईको बच्चाले त्यहाँ अर्को मधुमेह भएको बच्चालाई भेट्न सक्छन । मधुमेहको केयर गर्नुपनि सुरक्षित, रमाइलो र आनन्ददायक हुन सक्छ भन्ने बुझ्न सक्छन् ।
Posted in स्वास्थ्य/जीवनशैली Tagged बच्चा, मधुमेह
बालिकाको शव सडेको अवस्थामा फेला